မက္ကဆီကိုတွင် အင်အားပြင်းငလျင်လှုပ်ခတ်၊ အိမ်ခြေတစ်သန်းနီးပါး လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်၊ နှစ်ဦ?? - Yangon Media Group
မက္ကဆီကိုတွင် အင်အားပြင်းငလျင်လှုပ်ခတ်၊ အိမ်ခြေတစ်သန်းနီးပါး လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်၊ နှစ်ဦ??
မက္ကဆီကိုစီးတီး၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ၊ မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတွင် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက်၌ (ပေကျင်းစံတော်ချိန် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ရက် နံနက် ၇ နာရီ ၃၉ မိနစ်ခန့်၌) ပြင်းအား ၇ ဒသမ ၂ မဂ္ဂနီကျုရှိသော ငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရာ မြို့တော်မက္ကဆီကို စီးတီးနှင့် နိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတို့တွင် အိမ်ခြေတစ်သန်းနီးပါး လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်ခဲ့ရသည်။ ငလျင်ဒဏ်အခြေအနေထောက် လှမ်းသော စစ်တပ်ရဟတ်ယာဉ်တစ်စင်း ပျက်ကျသဖြင့် နှစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ရသည်။
မြို့တော် မက္ကဆီကိုစီးတီးနှင့် နိုင်ငံတောင်ပိုင်း အော်ဆာ ကာပြည်နယ်တွင် အိမ်ခြေ ၅ဝ ထက်မနည်း ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ ရသည်။ ထိုဒေသတွင် စက်တင်ဘာလကလည်း အင်အားပြင်း ငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့သေးသည်။
ငလျင်သည် မြေအောက်အ နက် ၁၅ မိုင်ခန့်ကို ဗဟိုပြု၍ လှုပ် ခတ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆက်တွဲငလျင် ငယ်ပေါင်း ၂၂၅ ခု ဆက်လက်လှုပ် ခတ်ခဲ့သည်။ မြို့တော်မက္ကဆီကိုစီး တီးတွင် ငလျင်လှုပ်မှုဒဏ် မခံစား ရမီ ၇၂ စက္ကန့် ကြိုတင်ပြီး သတိ ပေးနိုင်ခဲ့သောကြောင့် ဒေသခံများ ဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးရန် အချိန် ရခဲ့သည်။
မက္ကဆီကိုပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး နှင့် အော်ဆာကာပြည်နယ်အုပ်ချုပ် ရေးမှူးတို့ လိုက်ပါလာသော ရဟတ် ယာဉ်သည် ငလျင်ဒဏ်အခြေအ နေကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီး ဆင်း သက်ခါနီးတွင် ပျက်ကျခဲ့ရာ လူနှစ် ဦးသေဆုံးခဲ့သည်။ သို့သော် ဝန်ကြီး နှင့် ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့ အသက်ဘေးမှ လွတ်မြောက်ခဲ့ သည်။
ငလျင်ဒဏ်ကို ဂွါတီမာလာ နိုင်ငံကပါ ခံစားသိရှိခဲ့ရသည်။ မြို့ တော် မက္ကဆီကိုစီးတီးတွင် အထပ် မြင့်အဆောက်အအုံများ တစ်မိနစ် ကျော် ယိမ်းထိုးလှုပ်ရှားခဲ့သည်။ လူအများလမ်းပေါ်သို့ ကြောက် လန့်တကြား ပြေးထွက်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ငလျင်ကြောင့်သေဆုံးရမှု မကြားသိရသေးဟု အာဏာပိုင် များက ပြောသည်။
ယခင်နှစ် စက်တင်ဘာလက လည်း မြို့တော်မက္ကဆီကိုစီးတီးတွင် ငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရာ လူပေါင်း ၂၂၈ ဦး သေဆုံးခဲ့ရသည်။
မက္ကဆီကို၌ ရဟတ်ယာဉ်ပျက်ကျ၊ နှစ်ဦးသေ ဝန်ကြီးအသက်ချမ်းသာရာရ
ထိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် ပရာဝစ်ကို ရာထူးမှထုတ်ပယ်ရန် အွန်လိုင်းလက်မှတ် ၈ဝဝဝဝ ကျော် စုဆောင်
ဗိသုကာ ပညာရှင်မလေးနှင့် မိတ်ဆွေဖြစ်နေသော ဘရက်ပစ်
အင်ဒိုနီးရှား အရှေ့ပိုင်း၌ ၆ ဒသမ ၆ ရစ်ခ်ျတာစကေးရှိ အင်အားပြင်း ငလျင်လှုပ်ခတ်
ဆန္ဒပြပွဲများ ထပ်မံပြုလုပ်ရန် ရှိနေသော်လည်း ဟောင်ကောင်လေဆိပ်တွင် လုပ်ငန်းများ ပုံမှန်အတိုင်းပြန်လည်စတင်
စင်ကာပူနိုင်ငံမှ ခရီးသည်များ မန္တလေးမြို့သို့ လေကြောင်းဖြင့် တိုက်ရိုက် ဆင်းသက်နိုင်ရန် ဆေ
လူမှုကွန်ရက်ပေါ်တွင် ဒေါသစိတ်ဖြင့်ပြောဆိုနေခြင်းသည် နိုင်ငံအတွက်အကျိုးမပြုဟု နိုင်ငံတော်၏